Ra’iisul Wasaare Roobe oo hor tagay Golaha Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
Ra’iisul Wasaare Roobe oo hor tagay Golaha Shacabka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Rooble ‘Rogane’ ayaa maanta hor tagay Golaha Shacbka si uu uga war bixiyo wixi u qabsoomay 100-ka maalmood ee uu xaafiiska joogay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kulanka oo ahaa kala fadhiga Siddeedaad, kulankiisii 12aad ayaa waxaa goob jog ka ahaa 164 Xildhibaan, waxaana inta uusan billaban ka hor Guddoomiyaha Baarlamaanku uu sheegay in uusan Ra’iisul Wasaaruhu ka hadli doonin wax ku saabsan doorashada lagu muran-sanyahay.
Sidoo kale, Inta uusan kulanku billaaban ayaaa xildhibaanada kulanka joogay loo qeybiyay buug lagu soo koobay wax qabadka 100-ka maalmood ee xukuumadda.
Qorshe howleed-kii ay Xukuumaddu hore u keentay golaha ee ahaa dar-dar galinta doorashooyinka, sugidda Amniga, caddaaladda, dib u heshiisiinta, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, xakameynta musiibooyinka iyo kuwo kale ayuu sheegay Rooble in horu mar ballaaran laga sameeyay.
Si loo fududeeyo howlaha dowladda iyo la xisaabtan-kooda ayuu sheegay RW Rooble in Wasaaradaha Dowladda loo qeybiyay Afar Tiir oo kala ah Tiir-ka siyaasada loo dhan yahay, Tiirka Hurumarinta dhaqaalaha, Tiirka Amniga iyo cadaaladda iyo Tiirka horumarinta arimaha bulshada.
RW Rooble ayaa ku faanay in Xukuumaddisu ay ku guuleysatay kobcinta dhaqaalaha dalka isagoo sheegay in dakhliga Dakadda Muqdisho ka imaan jiray uu ahaa Siddeed Malyan, halka la gaarsiiyay 12 Malyan oo doolar.
Wuxuu carrabaka ku dhuftay in xukuumaddiisu ay buuxisay shuruudihii looga baahnaa ee deynn cafiska ee la qorsheeyey muddadii 100-ka maalmood ahayd.
Rooble ayaa waxqabdka uu ku faanayay ku darsaday waddoonyin la furay, Garsoor la haajiyay, musiibooyin laga hor tagay, dib u heshiisiin iyo qodobbo badan oo aan wax muuqda laga qaban.
Rooble wuxuu sheegay in Xukuumaddiisu aya isku dayday in ay dalka ka qabato doorasho la isla ogol yahay oo waafaqasan heshiiskii 17-kii September hayeeshee aysan suura galin, walina ay diyaar u yihiin qabashada doorasho xalaal ah oo is oggol ah.